Russian Aeroflot inotangazve ndege kuenda kuNice, France
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Russian Aeroflot inotangazve ndege kuenda kuNice, France
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • France Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mureza weRussia Aeroflot ichatangazve kubhururuka kuenda kuFrench Riviera - Yakanaka kubva munaNovember 20, vakuru venhandare vakati. Asi zvimwe chete zvikamu zvevafambi ndizvo zvinobvumidzwa kupinda muFrance hazvo.
Ndege dzinotanga kushanda kubva munaNovember 20, kamwe chete pasvondo neChishanu.
"Aeroflot ichatangazve kuenda kuNice kubva muna20 Mbudzi 2020. Ndege SU2360 / SU2361 Moscow - Nice - Moscow ichavhenekwa kamwe pasvondo neChishanu. Sezvo traffic yepasi rese yadzoreredzwa, kuwanda kwendege kunogona kuwedzera, "kambani yendege yakadaro pawebhusaiti yayo.
Tiketi yekutengesa ikozvino yakavhurwa pane iyo Aeroflot webhusaiti uye kuburikidza nevakuru vakuru vamiririri.
“Ruzivo rwechizvino-zvino pamusoro pehurongwa hwekufamba nendege nebasa rinoburitswa pawebhusaiti yendege. Kubhururuka kwendege kunowanikwa pawebsite yendege uye kumahofisi ayo ekutengesa, ”meseji inowedzera.
Yepasirese hotera inoda hukuru hwekupokana nemakwikwi emitengo